Heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaaladii ka dhacay Gobolka Hiiraan | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaaladii ka dhacay Gobolka Hiiraan
Heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaaladii ka dhacay Gobolka Hiiraan
Waxaa Maanta heshiis hordhac ah laga gaaray dagaaladii u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaayay deegaano hoostega Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
War-saxaafadeed laga soo saaray kulamo dhexmaray Odayaasha iyo Waxgaradka beelihii dagaalamayay ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis hordhac ah looga gaaray Colaadii khasaaraha isugu jiray dhimasho iyo dhaawac geysatay ee ka dhacday Hiiraan.
Laba Beel ayaa ku heshiiyay in la kala qaado maleeshiyaadka labada dhinac ee is hor-fadhiyay, isla markaana deegaankii sida gaarka ah la isugu haayay aan cid dhisan karin ilaa iyo heshiiska laga dhameystirayo.
Sidoo kale heshiiska ayaa waxaa ku jira in qofkii hubeysan ee lagu arko deegaanadii lagu dagaalamay oo aan ka tirsaneyn Ciidanka dowladda lasoo qaban doono, isla markaana la xiri doono 6 bil oo xabsi ah.
Heshiiska ay gaareen beelihii maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaano hoostega Magaalada Baladweyne ayaa waxaa garwadeen ka ahaa wafdi ka socday dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Hirshabeelle.
Dagaalkan dhexmaray maleeshiyaadka beeleedka ayaa salka ku haayay Arrimo la xiriira dhul-daaqsimeedyo, waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah, lana gubay Guryo.
Maqaal horeShirka Wadatashiga Doorashada oo Is-faham looga gaaray Qodobo
Maqaal XigaXukuumadda xilgaarsiinta oo shaacisay xiliga lasoo xirayo Shirka Doorashada